Akondro sy ronono, manatsara hodi-tava vetivety
Manan-karena « antioxydants » ny akondro. Fahita mandavan-taona koa ity voankazo ity, ka azo atao tsara ny mikarakara tarehy aminy.
Manala an’ireo sela maty izy, ary manatanora endrika ihany koa. Tsy vitan’izay fa manamandina hoditra, manaitaitra ny hoditra maloka sy vizana, ary manarina ireo hodi-tava simba sy reraka. Ahoana àry ny atao ?
Akondro sy siramamy
Atao ao anaty lovia kely ny akondro masaka tsara iray, sy ny siramamy vaventy 1 sotrokely. Afangaro tsara izany dia ahosotra amin’ny tarehy sady manoritra boribory. Mandritra ny dimy minitra no hanaovana izany sady kosehina moramora ihany. Kobanina avy eo. Sady ho afaka ny sela maty no ho toy ny vaovao ny hodi-tava. Mandina ihany koa ny hoditra maina sy maloka.
Akondro sy ronono
Ao anaty lovia kely koa ny akondro masaka iray, ary poretina amin’ny sotrorovitra. Arotsaka ao avy eo ny « avoine » 2 na 3 sotrokely novidiana teny amin’ny pavillon Analakely. Rarahana tantely sy ronono 1 sotro avy eo. Rehefa mifangaro tsara ireo rehetra ireo dia alona eo amin’ny tarehy mandritra ny 5 minitra. Kosehina moramora sy malefaka avy eo ary atao manoritra boribory. Kobanina amin’ny rano mangatsiaka. Raha maina sy makiana be ny hoditrao dia tsara raha soloina “crème fraiche” ny ronono.